Accueil > Gazetin'ny nosy > Dispensaire – Association Pachamama: Tafapetraka ny vato fehizoron’ny toera-pitsaboana
Dispensaire – Association Pachamama: Tafapetraka ny vato fehizoron’ny toera-pitsaboana
Nikarakara hetsika ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy ny fikambanana Pachamama eto an-toerana, izay nanomboka ny 12 ka hatramin’ny 18 martsa ary niarahana tamin’ny Pachamama avy any Frantsa ny hetsika.
Tontosa omaly teny Soavimasoandro ny hetsika famaranana izany ary nisy ny fametrahana vato fototry ny toeram-pitsaboana, izay efa tamin’ny herintaona no saika hamitana izany, izay notarihin’ny Jeff Tordo, izay kapitain’ny ekipa de France teo aloha niaraka tamin’ireo solotenany mpianatra avy amin’ireo “lycée francaise”, vehivavy eto amin’ny ranomasim-be indianina. Nandritra ny lanonana no nilazan’I Jeff Tordo fa “ Voalohan’ny ho izy dia manome voninahitra ny vehivavy isika satria dia nandritra ny fankalazana ny andron’izy ireo dia afaka nanao fanamboarana maro isika mikasika ny tolona izay atrehitsika amin’ny mikasika ny tany tsika izay nisy namefy . Efa nisy ny fampidinihana ary dia nahitana vahaolana vonjimaika tokoa izany na dia tsy mbola nisy aza ny taratasy ofisialy manambara izany. efa notambazana tany hafa ny Pachamama hifindrany ary efa eto ampelatananay ny « Plan » momba izany. Fa saingy tsy mijanona ny tolona raha tsy voasoaratra ara-panjakana sy ara-dalana voamarina any amin’ny Notaire ka amin’ny anaran’ny fikambanana mazava ny tany. Mankarary fo ho izy no nahita ireo ankizy malagasy maro be noroahan’ny mpitandro filaminana niala teto. Ireo ankizy ireo no hery sy manome finiavana anay handroso hatrany. Teto izy ireo dia nahazo fitsaboana, fanampiana ara-pianarana maro sy ara-panatanjahantena. Ny Rugby Frantsay dia vonona hanampy ireo malagasy nisitraka io tetikasa io ary mbola vonona hanome fanampiana ka hiady hatramin’ny farany izay ahitana vahaolana mazava hampilamina ny raharaha.
Ka mahazo tany solony amin’ny anaran’ny fikambanana satria efa folo taona izahay no nanazary sy nanorina teny ary nanaraka ny fomba rehetra ara-panjakana mba hahazoana ny tany hisoratra amin’ny anaranay nefa dia izao misy maka izao indray” Nisy tetik’asa izay mizara roa nokarakarain’ny fikambanana tamin’ny izany. Ny voalohany dia mifantoka tanteraka tamin’ny fankalazana ny andron’ny vehivavy izay natao nandritra ny herinandro. Ka nisy ny hetsika maro ho fiarovana ny vehivavy. Nisy fiara izay nitety tanana nanao fitialiana ny homamiada ny “Col sy ny Utérius” maimaimpoana hoan’ny vehivavy. Amin’ny maha herinandro ny vehivavy azy dia nisy ihany koa ny hetsika ara-panatajahan-tena, ka ny rugby no nentina nankalaza izany amin’ny maha taranja mampifandray sy “Insertion social”. Dia nisy ny lalao Iraisam-pirenena rugby à 7 hoan’ny vehivavy teo Mahamasina izay nadraisan’ireo mpianatra avy any amin’ny lycée francaise maro avy any Kenya, Mayotte, La Reunion ary nanana solo tena telo i Madagascar teo amin’ny sokatsy latsaky ny 18 taona sy 15 taona Pachamama Soavimasoandro. Nandritra ny hetsika dia nisy ny trano eva maro izay nandraisan’ireo fikambanana misahana ny vehivavy Anjara. Nisy ihany koa ny fitiliana Hepatite B, VIH ary ny angatra.